Global Voices teny Malagasy » Tsunami: Tamberin’ny Bilaogy Maleziana Herintaona Taty Aoriana (2005) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Desambra 2017 2:02 GMT 1	 · Mpanoratra SK Thew Nandika Miranah
Ho fahatsiarovana ny Tsunami izay nitranga tao Pasifika Azia tamin'ny taona 2004 , nametraka lahatsoratra fahatsiarovana ireo bilaogera manerana izao tontolo izao.
MickZul nanokana bilaogy ho an'ireo namoy ny ainy ary mivavaka ho an'ireo izay velona mba hiaina fiainana tsaratsara kokoa ary na dia mbola mahatsapa fanaintainana aza i Chan Lilian, dia nanapa-kevitra hametraka ny lahatsorany nohavaozina momba ny zavatra niainany  tany Penang nandritra ny tsunami izy. Nampahatsiahy ny tranga i Lucia Lai, izay avy any Penang ihany koa ary nahatsiaro faly  fa anisan'ireo ONG nanavotra ireo niharam-boina izy, raha nivavaka mangina  ho an'ny maty sy ny velona kosa ny bilaogera iray hafa.
Averina indray, satria miresaka taona iray  isika, afaka mahatsapa i alvinyv fa maro amintsika no mihevitra fa mety tsy afaka manao izay azontsika atao mba hanampiana ireo sisa velona tamin'io loza io isika. Marina tokoa ny milaza fa, mbola tsy tara loatra ny manome sy manampy. Saingy, satria tsy nozaraina araka ny tokony izy ny ankamaroan'ny fanomezana, ary vitsy no nomena an'ireo niharam-boina, niova ny fahatokisana sy ny finoana ireo fikambanana mpanao asa soa . Mampalahelo kanefa tena marina.
Jamloceng nanolo-kevitra tamin'ny fampiasana “solosaina mifampitohy ” na solosaina an-tambajotra  izay tena zava-dehibe amin'ny fandehanan'ny Linux ho -rafitra fanairana mialoha. Mihevitra ity bilaogera ity fa amin'ny alàlan'ny famoronana rafitra open source iray, hijery ity kaody ity amin'ny fomba matotra kokoa ireo firenena voakasika satria mahakasika ny fiainan'izy ireo izany, ary zava-dehibe ny fizarana vaovao eo amin'ny firenena mba hamoronana rafitra manondro kokoa ny marina.
Ny tsara lazaina dia hoe, ny maodelim-pifandraisana novolavolain'ny bilaogy nandritra ny tsunami no nametraka fenitra fitantaran'ny tranonkala ireo loza mifanesy .
Andeha hivavaka mba tsy hitranga intsony ny zavatra tahaka izao ary manantena fa afaka hahita fiadanana ireo voakasik'ity loza ity. Miss Muffin kosa nanoratra tononkalo  ho an'ny fanahin'ireo nandao antsika, ireo nentin'ny onja mpamono olona sy nampahatsiahy fa tsara vintana isika.
Ah, mbola misy ny fanantenana !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/23/111660/
 Ho fahatsiarovana ny Tsunami : http://threebeeling.blogspot.com/2005/12/one-year-dsaster-tunami-remembrance.html
 nanokana bilaogy : http://www.brandmalaysia.com/movabletype/archives/2005/12/remembering_the.html
 zavatra niainany: http://chanlilian.net/2005/12/26/recycled-post-of-my-experiences-during-the-2004-tremorstsunami/
 nahatsiaro faly: http://jogalong.blogspot.com/2005/12/tsunami-year-ago.html
 nivavaka mangina: http://www.larawannabe.com/archives/2005/12/remembering_the.html
 miresaka taona iray: http://alvinyv.org/?p=83
 niova ny fahatokisana sy ny finoana ireo fikambanana mpanao asa soa: http://wekgna.com/blog/?p=464
 solosaina mifampitohy: http://jamloceng.blogspot.com/2005/12/linux-for-human-race.html
 ny maodelim-pifandraisana novolavolain'ny bilaogy : http://memoryanddesire.blogspot.com/2005/12/tsunami-and-bloggers.html
 fenitra fitantaran'ny tranonkala ireo loza mifanesy: http://worldwidehelp.blogspot.com/2005/12/remembrance-week-26th-december-2005.html
 mba tsy hitranga intsony ny zavatra tahaka izao : http://spaces.msn.com/members/desigurl/Blog/cns!1pMiSKatIosrkUD6sqRJfSgQ!371.entry
 mbola misy ny fanantenana: http://www.jeffooi.com/archives/2005/12/tsunami_from_de.php